Kutaan kun odeeffannoo waa'ee akkaataa itti gabatee kuusdeetaa haaraa mul'annoo saxaxaa keessatti uumuu of keessaa qaba.
Faayilicha kuusdeetaa kan kuusdeetaa bakkatti gabatee haaraa barbaaddu bani. SajooGabatee cuqaasi. Gabatee haaraa uumuuf Mul'annoo Saxaxaa keessatti Gabatee Uumi fili.
Mul'annoo Saxaxaa keessatti, gabatee keef amma dirreewwan uumuu ni dandeessa.
Gubbaarraa gara gadiitti tarreewwaniin dirreewwan haaraa galchi. Man'eeMaqaa Dirree cuqaasiiti tokkoon tokkoo dirree deetaaf maqaa dirree galchi.
Dirree deetaa "furtuu dursaa" itti dabali. Qabiyyeewwan gabatee gulaaluu danda'uuf Bu'uurri furtuu dursaa fedha. Furtuun dursaa tokko tokkoo kuusaa deetaaf qabiyyeewwan addata qaba. Fakkeenyaaf, dirree lakkoofsaa saagi, tarjicha jalqabaa mirga-cuqaasiiti, baafata halqaraa irraa Furtuu Dursaa fili.GateessaaUfnaa gara "Eeyyee" tti qindeessi.
Man'ee itti aanu gara mirgaa keessaa, Gosa Dirree hiiki. Yommuu man'ee keessa cuqaastu, gosa dirree sanduuqa makaa keessaa filachuu ni dandeessa.
Tokkoo tokkon man'ee deetaa gosa dirree iftaa'etti walitti dhufoo tahe qofa fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf, dirree lakkofsaa keessa barruu galchuun hin danda'amu. Dirreewwan yaadannoo dhangii dBASE III keessaa faayiloota barruu keessaan-taaligaa'an kanneen barruu hanga 64KB baachuu danda'aniif wabiidha.
Tokko tokkoo dirreef dirqalaIbsa galchuu ni dandeessa. Barruun ibsaa matadureewwan tarjaa mul'annoo gabatee keessaa irratti akka qacceetti mul'ata.
Tokko tokkoo dirree deetaa filatameef amaloota galchi. Gosa kuusdeetaa irratti hundaa'uun, mijeessotni naqaa muraasni jiraachuu dhiisuu ni danda'u.
Sanduuqa Gatii durtii keessaa, kuusaa haaraa halleef qabiyyeewwan durtii galchi. Qabiyyeewwan kun booda gulaalamuu ni danda'u.
Sanduuqa Galfata barbaachisuu keessaa, dirreen duwwaa turuu fi turuu baachuu isaa ifteessi.
Sanduuqa Length tiif, sanduuqni makaa kan filannoowwan jiran laatu tarii agarsiifamuu ni danda'a.
Title is: Saxaxa Gabatee